Nkpuru obi | Ọkọwa Okwu Ahụike
Obi Ngwọta Obi
Obi Ngwọta Obi.
Ndị mmadụ na-enwe obi mgbawa (obi na -akasị ya miri n'ime obi) yana mgbu. Acid acid na-abanye n’alụ et / esophagus na-akpata obi mgbawa.
Obi mgbawa, jikọtara ya na nrụgide na nri ndị na-atọ ụtọ, nwere ike na-egbu m mgbu. Crimịnye ọgwụ na ọgwụ ị na-ere ga - enyere aka wepụta ihe mgbaàmà ahụ nwa oge, mana ha na - ekepụta acid ọzọ n'ahụ, nke ga - aghọ ajọ usoro.